Khabar Break - यस्तो छ समृद्ध भीमफेदी बनाउने हिदम लामाको योजना
मकवानपुरको विकट ईपा गाउँमा २०३८ सालमा जन्मेका युवा संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हिदम लामा नेकपा एमालेको तर्फबाट भिमफेदी गाउँपालिकामा अध्यक्षको उमेवद्वार हुनुहुन्छ लामो समय अनेरास्ववियुमा रहेर कुशल नेतृत्व प्रदान गरेका लामा हाल युवा आन्दोलनमा सकृय रहेका छन् । कुशल युवा नेताको रुपमा पहिचान बनाएका लामासँग खबर ब्रेकको लागि विवश अधिकारीले गरेको कुराकानी
- अहिले चुनाव कतिको लागेको छ गाउँ तिर ?
स्थानीय तहको निर्वाचन जिल्ला भरी नेपालको सबै भेगमा चहलपहल राम्रै छ । मकवानपुरको सबै गाउँपालिकाहरु, उपमहानगरमा पनि यसको चुनावी रौनक बढेर गएको लेखिन्छ । भिमफेदीमा गाउँपालिका साविक ५ वटा गाविसलाई मर्ज गरेर एउटा गाउँपालिका बनेको छ । यो गाउँपालिकामा पनि सबै राजनीतिक दलहरु लागेको देखिन्छ ।
- भिमफेदी मकवानपुरको एउटा पुरानो इतिहास बोकेको गाउँ हो । तपाई अध्यक्षमा उमेवद्वारी दिनुभएको छ । तपाई अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो भने भिमफेदी गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ । तपाईको योजना के के छ ?
मुलत हामीले यो देशमा राजनीतिक परिवतर्नका एजेण्डाहरुमा अब नेपाली जनताले आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन । किनभने राणा फाल्यौ , पञ्चालयत पाल्यो , निरंकुश राजतन्त्र फाल्र्या ।६२÷६३को जन आन्दोलन पछि यो देश एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलन एक हदसम्म समाप्त भइसकेको छ । अबको आन्लोलन भनेको समृद्धिको आन्दोलन हो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सनर्माणको अभियान हो । निश्चित रुपमा हामीले नित्दा भिमफेदी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको निम्ती त्यहाँका नागरिकहरुलाई सुखी बनाउनको लागि मेरो भुमिका हुनेछ ।
योजनाहरु के के ल्याउनु भएको छ । तपाईको आजकाल त नारा नै छ हैन , खानी, पानी र जवानी भन्ने , निकै चर्चा छ अहिले बजारमा , यस्को अर्थ के हो ?
मैले यो विषयमा अलिकति पछि छलफल गरौँला । यो भन्दा अगाडी मैले भिमफेदी गाउँपकिला मेरो नेकपा एमालेको उमेवद्वारी मलाई पार्टीले सर्वसम्मत रुपमा मलाई बनाएको हुदा । मैले भिमफेदीलाई परिवर्तन गराउनको निमती मेरो आफ्नो दृष्टिकोण पार्टीमा छलफल गरेर अगाडी बढाइरहेको अवस्था हो । मैले भिमफेदीलार्ए सिंगापोर, स्वीजरल्याण्ड बनाउछु छ म भनन सकँिदै । ५ वर्षको अवधिमा मैले आफ्ना कार्ययोजनाहश्र आफ्नो कार्यक्रमहरुलाई लागु गर्न पाउँदा , त्यहााका नागरिकह्रुले गौरव गर्ने अवस्था म बनाउन सक्छु भन्ने मेरो योजना छ । विषृशगरी भिमफेदी नेपालको यस्तो मल्टि डाइभरसिटी भएको देश नेपालको पनि यो भिमफेदी अतयन्तै हरेक हिसाबले सम्पन्न हो गाउँपकिलका हो जस्तो मलाई लाव्ग्छ । किन भने तािई रक्सौल जानुस ३५ डिग्री ताप्क्रम छ । , हेटौँडा आउनुस् २५ डिग्री , भैँसे पुग्ुन भएपछि २० डिग्री , अलिकती माथि चुनिया र अगोरमा पुग्दाखेरी पुग्दा १८, १७, १५ पुग्छ । यस्तो खालको मल्टी डाइभरसीटि भएको मात्रामा धेरै ठाउँहरुमा पाइदैनन् । निर्वाचित भइसेकेपछि व्यवसायीकरुपमा युवाहरुलाई यही मुलुकमा स्वोराृजगार बनाउनको निम्ती व्यवसायीक सिपमुलक शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ती मेरो पहल रहने छ । त्यसपछि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मासु खरिद गर्नको लागि मात्र २० अरब भनदा बढि हामी नेपालीले मासु किन्दो रहेछ । बोइलर कुखुरामा अलि आत्मनिर्भरता बन्दै गएको देखिन्छ भने खसी बोका, च्याङग्रा माछा, खरीद गर्नको लागि मात्र २० अर्ब रकम बाहिर जाँदो रैछ । त्यसैले मेरो पहिलो प्रयास युवाहरुलाई यो देशमा स्वोराजगार राख्नको लागि, र मासुमा आत्मनिर्भर भिमफेदी गाउँपालिकाले योगदान गर्नुपर्छ भनेर साविक नामटारको अगोर भनदा तल लामीडाँडा देखि साविक निबुवाटारको ।ानीखोला भन्दा माथि, देउरालीको त्यो रेन्जमा व्यापक ढंगले खसी बोका बाख्रा पालनको पकेट एरियाको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौँ । मलाई विश्वास छ ४२ डिग्रीको तातो घाममा मरुभुमीमा भेडा चराएर २५ हजार कमाइरहेका युवाहरुलाई यही भिमफेदीमा हामी ४–५ हजार बाख्रा पालन गरेर , ३० हजार यही नेपालीलाई दिन सक्छाँै भन्ने अठोट छ । यसरी गर्दा राज्यको अर्थतन्त्र ठूलो मात्राको बृद्धि विदेश जाने पैसा राकिने छ । मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा योजना छ भने साविक भिमफेदीको सुपिङ , साविक निबुवाटार इच्छुङ र साविक भैसेको कालटार एरिया लाई हामी अर्गानिक भेजिटेबल जोनको रुपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ । त्यो ठाउँ अत्यन्तै १२ महिना सिजनल तरकारीहरु असिजनल तरकारीहरु उत्पादन गर्न चाहन्छौँ र गर्न सक्छौँ । त्यहाको वातावरणले हामीलाई दिन्छ र धेरै युवाहरुलाई हामी त्यहाँ ँेजगारी दिन सक्छौ । र अर्को कुरा,, नेपालको जम्मा जमीनको झण्डै ४२ प्रतिशत जमीन जंगलको ओगटेको छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रमा जम्मा अर्थतन्त्र त्यस्को लगभग जीडिपिमा १ प्रतिशत पनि योगदान छैन । त्यसैले अगोर भनदा माथि सिमभञ्ज्याङ भन्दा तलको रेन्ज जहाँ यार्सागु म्बा बाहेक सबै जडीबुटीहरु हुन्छ । त्यसैले त्यो क्षेत्रमा लिजमा दिएर हामीले जडीबुटि उच्पादन क्षेत्र बनाउन सक्छौँ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र खोलेर धेरै युवाहरुलाई रोजगार दिन सक्छौँ । हामीले यो ठाउँलाई पर्यटन क्षेत्र को रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्रिखण्डीको होटलमा चिया खाएर गाडी गन्नु भयो भने बिहार र युपिवाट रमाईलो गर्न ति युवाहरु कठमाण्डौ जान्छन् । ति ५ सय युवाहरुलाई सबैभन्दा नजिकको ठाउको रुपमा यो एरिया छ, जहा राम्रो होटल खोल्न सक्छौ । त्यहा हनिमुन प्लेस समेत बनाउन सकिन्छ ।
खानी पानी र जवानीको कुरा के हो त ?
खासमा त्यो यो स्थानको लागि आवश्यक छ । यो स्थान विशेष नारा हो । जस्तै पुर्वको बकैया र वागमतीमा सुकम्वासी सम्वन्धी नारा तय गरिएको छ । तर भीफफेदी गाउँपालिकामा धेरै खानी रहेकोले खानी नारा बन्यो । पानीको श्रोत र बेरोजगार युवालाई रोजगारी बनाउनको लागी यि तिन नारा संप्रेषण गरिएको छ । यहा खुल्ने जतीपनी खानीको एरिया यो भीमफेदीमा पर्छ । खानी राज्यको सप्पती भएको कारणले जनताको हो । तर आज जनताको सम्पती झोलामा बोकीएको छ । तर हामी गाउँपालिकामा जितेपछि हामी जनतालाई समृद्ध बनाउनको लागि लाग्छौ । जनताको थाकथलोबाट हटाईएको छ, त्यहाको जनता सधै गरिब भए तर त्यो पैसा केहि पुँजुपती झन धनी बने । तर अव जनताको सम्पतीले जनता धनी बनाउँछौ । पानीको सन्र्दभमा पानीको रोयल्टीबाट समृद्ध भीमफेदी बनाईन्छ । ५० प्रतिशत रोयल्टी खर्च हुनु पर्नेमा भएन अब त्यो हुन्छ । अब खोलालाई सिंचाईमा भरपुर प्रयोग गरिन्छ ।
योजना त बन्छ तर कार्यन्वयनमा समस्या होलानी त ?
यो हिजोको जस्तो हैन यो स्थानीय सरकार भएकोले योजना कार्यन्वयनमा खासै समस्या आउँदैन् । समस्या आएपनि सबैको सहकार्यमा त्यसलाई निबारण गर्न सकिन्छ । अब भीमफेदी गाउँपालिकालाई सम्मृद्ध बनाउनको लागी अमेरीकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम, चाईनाको राष्ट्रपति सि जि पिङ आएर भीमफेदीमा पैसा फल्ने रुख रोप्ने हैन् । अबको आन्दोलन सुखी र समृद्ध नेपाल बानाउने हो । हामीले हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई उपयोग गरेर समृद्ध बन्ने हो ।